Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada UK oo diyaar garow adag ugu jirta Shirka “Ogaden To Dadaab In Search of Peace”
Jaaliyada UK oo diyaar garow adag ugu jirta Shirka “Ogaden To Dadaab In Search of Peace”
Posted by ONA Admin	/ September 13, 2013
Shirbalaadhan oo bari 14 Septemper ka dhici doona Magaalada London ayaa diyaar garow adag loogu jira iyada oo Xafiiska Jaaliyada London aad ka dareemaysid qabanqaabada shirkaas bari dhici doona.
Gudomiyaha Jaaliyada London Mudane Cabdi Casiis ayaa ONA u sheegay in la rajeynayo kulankan innuu wax badan ka badali doono aragtida dadweynaha ee ku aadan Xeryaha Qaxootiga.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb gali doona Sida aan warar ku helnay Haayado u ololeeya xuquuql insaanka iy saxiibo badan oo jaaliyada UK laa leedahay haayado ka jira wadankan UK.
Ujeedada kulankan oo ah mid lagu soo shaacsaarayo Qadiyada Qaxootiga Ogadeniya ee ku nool Xeryaha Qaxootiga ayaa Barnaamijkan waxaa la rajeynaya innuu kasoo baxo waxyaalo wax tarweyn u leh shacabka Ogadeniya gaar ahaan Qaxootiyada Ogadeniya oo dhibaatoyin badan la kulmaan.
Dhibaatoyinka qaxootiga Ogadeniya waxaa kamid ah in qaxoontiga cusub lagu rafaadiyo xeryaha Qaxootiga iyaga oo helin taakulada ay qaxootiyada kale helaan.
Waxaa soo badanayay shilalka dilka ah ee lala beegsado qaxootiga kasoo jeeda Ogadeniya iyada oo ay yartahay waxa laga geystay sidii looga hortagi lahaa danbiilayshaas oo lagu eedeyo in Talisk Woyanuhu ka danbeeyo.
Barnaamijkan ayaa waxaa ka qeyb gali doona Khubaro uu kamid yahay Graham oo isagu ah nin masuul ka ah Haayad wax ka geeysata sidii siminaaro loo siin lahaa dadyowga qaxootiga ah si ay isku filaansho u gaadhaan. Sidoo kale Graham ayaa qoraa ah waxuuna waxbada ka qoray Qadiyada Qaxootiga Ogadeniya ee ku dhibaateysan xeryaha Qaxootiga Dhadhaab. Khuburo kale ayaa kasoo qeyb gali doona Barnaamijkan oo ka hadli doona Qadiyada Ogadeniya iyaga oo Guud ahaanba dhibaatoyin Ethiopia ka jira lagaga hadli doono shirkan.
Shirkan oo Jaaliyada Ogadeniya ee UK soo qaban qaabisay, qaban qaabadiisina dhamaatay, Ayaa Hoggaanka Abaabulka Jaaliyada Marwo Raxma waxa ay Jaaliyada Ogadeniyaee UK ogeysiinaysa in aan shirkaas loo kala hadhin
waxaa balan innoo ah Bari galabtii iyo Shirkan.
Hoos ka fiirso Xayaysiiska Shirka.